Kedu ihe ekwuputara na ikike ikike? | Martech Zone
Canada na-agbasi mbọ ike iji meziwanye ụkpụrụ ya na SPAM yana ntuziaka ndị azụmaahịa ga-erubere mgbe ha na-ezipụ nkwukọrịta email ha na nke ọhụrụ. Iwu Mgbochi Spam nke Canada (CASL). Site na ndị ọkachamara anapụta ihe nke m gwara, iwu abụghị ihe doro anya - na onwe m, echere m na ọ bụ ihe ijuanya na anyị nwere gọọmentị mba na-egbochi nsogbu ụwa. Cheedị mgbe anyị ga-enweta narị narị gọọmentị dị iche iche na-ede iwu nke aka ha… agaghị ekwe omume.
Otu akụkụ nke CASL bụ ọdịiche dị n'etiti gosipụtara na kwuru ikike. I gosiputara ikike bụ opt-in usoro ebe onye natara email ahụ pịrị ma ọ bụ debanye aha ha. Ntinye ikike dịtụ iche. Mụ na otu onye na-eweta ọrụ email na-eweta mgbapụta na nke a. O nyela m kaadị azụmahịa ya na adreesị ozi-e ya na ya - m wee mee ya kwuru ikike izigara ya akwụkwọ ozi m. Ọ kpesara onye na-enye m email na-eme mkpesa ozugbo. Ọ dị ya ka ọ nyeghị ikike. Echere m na ọ mere.
O zighi ezi, n'ezie. Ọ bụ ezie na echiche nke onwe ya bụ ihe achọrọ maka ikike ekwuputara, enweghị ụkpụrụ dị otú ahụ (ma). Na iwu United States 'CAN-SPAM, ị chọghị echiche gosipụtara ma ọ bụ gosipụta ikikere iji zigara onye ọ bụla oziAchọrọ gị ịnye usoro ịpụ apụ ma ọ bụrụ na ịnweghị mmekọrịta azụmahịa na onye debanyere aha. Nke ahụ ziri ezi… ma ọ bụrụ na ị nwere mmekọrịta azụmahịa, ị nweghịdị mkpa ịnweta ịpụ! Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ụkpụrụ, ndị na-enye ọrụ email na-ewere ya na usoro ha.
Egosiputa ihe omuma enyere
Kwa CASL, lee ihe atụ nke ọdịiche dị n'etiti nkwupụta ikikere gosipụtara na ikikere egosipụtara:
Ikike Nkwupụta - Ọbịbịa na saịtị gị jupụtara n'ụdị ndenye aha na ebumnuche nke itinye gị na ndepụta gị. E zigara email nkwenye opt-in nke chọrọ onye nnata iji pịa njikọ iji gosi na ha chọrọ itinye na listi ahụ. A maara nke a dị ka ụzọ ịpụ apụ na ụzọ abụọ. Mgbe ha pịrị njikọ ahụ, ụbọchị / oge na stampụ IP kwesịrị idekọ ya na ndekọ ndekọ aha ha.
Ikwu Ikike - Ọbịbịa na saịtị gị dejupụtara fọm ndebanye iji budata akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ denye aha maka ihe omume. Ma ọ bụ onye na-azụ ahịa na-enye gị adreesị ozi-e site na kaadị azụmahịa ma ọ bụ na nlele. Ha ekwuputaghi ikike na ha chọrọ ka ha nweta ozi nkwukọrịta ozi-e n'aka gị; ya mere, ekwuputara ikike - egosighi ya. Ka nwere ike izipu ozi nkwukọrịta na mmadụ, mana naanị maka obere oge.
Ọ bụ ezie na usoro nke ndị na - eweta email ọ bụla kwuru na ị ga - enwerịrị ikike, ha na-enye gị ụzọ niile ịbubata ndepụta ọ bụla enwere ike ịchọta ma ọ bụ zụta. Yabụ, nzuzo ruru unyi nke ụlọ ọrụ ahụ bụ na ha na-enweta ụtụ ego n'aka ndị ahịa ha na-eziga SPAM mgbe ha na-agagharị na ụlọ ọrụ na-eti mkpu na ha anaghị emegide ya. Na teknụzụ niile dị elu nke ESP na-enyefe ikike, algọridim, yana mmekọrịta adịghị mkpa squat… n'ihi na ha anaghị achịkwa ihe na-eme ya na igbe mbata. Onye na-ahụ maka ịntanetị na-eme. Nke ahụ bụ nnukwu ihe ruru unyi nke ụlọ ọrụ ahụ.
Kedu ka ikike si emetụta igbe mbata?
Egosiputara ikike ikike enweghị mmetụta ọ bụla na ike gị iru igbe mbata! Onye na-ahụ maka ọrụ ịntanetị dịka Gmail enweghị ntụpọ mgbe ha natara email ma ị nwere ikike iji zipu ya… echefula eziokwu ma ekwupụtala ma ọ bụ na ekwuputaghị ya. Ha ga-egbochi ozi ịntanetị dabere na nkwupụta okwu ahụ, adreesị IP nke ezitere ya, ma ọ bụ ọtụtụ algọridim ndị ọzọ ha na-eji. M ga-agbakwunye na ọ bụrụ na ị na-a bit ida na gị onwe onye definition nke kwuru, ị nwere ike ịkwọba akụkọ SPAM gị wee mechaa nwee nsogbu iru igbe mbata.
Ekwuru m mgbe niile na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ n'ezie idozi nsogbu ahụ na SPAM, mee ka ndị ISP jikwaa ikike ahụ. Dịka ọmụmaatụ, Gmail nwere ike ịmepụta ihe API n'ihi na ịpụ na-ebe ha mara na ha ọrụ nyere kwupụtara ikike na-enweta email site na-ere. Amaghị m ihe kpatara na ha anaghị eme nke a. Aga m adị njikere ịkụ nzọ a na-akpọ dabere na ikike email na enye ọrụ ga iti mkpu ma ọ bụrụ na ọ bụla mere… ha ga-atụfu ego buru ibu na-eziga ọtụtụ SPAM.
Ọ bụrụ na ị na-eziga email azụmahịa ma chọọ ịlele ike gị iru igbe mbata, ị ga-eji ọrụ dịka ndị na-akwado anyị na 250ok. Nke ha onye ozi nnabata nye gị ndepụta mkpụrụ nke adreesị email iji gbakwunye na listi email gị ma ha ga-akọrọ gị ma ma ozi ịntanetị gị ọ na-aga na folda junk ma ọ bụ mee ya na igbe mbata. Ọ na-ewe ihe dịka nkeji ise iji hazie ya. Anyị na-eji ya na CircuPress ebe anyị na-ahụ igbe ntinye igbe dị egwu. Ọrụ ha ga-emekwa ka ị mara ma ọrụ gị ọ debanyere aha.
Canadiankpụrụ ndị Canada na-ewere nzọụkwụ ọzọ na nke ahụ na-etinye njedebe afọ 2 na izipu email na onye ọ bụla nwere echiche ikikere. Yabụ, ọ bụrụ na onye gị na ya nwere mmekọrịta azụmahịa na-enye gị adreesị email ha, ị nwere ike izipu ha email… mana naanị maka oge ụfọdụ. Amaghị m na ha ga-esi mee ka iwu dị otú a. Echere m na ndị na-enye ọrụ email ga-emezigharị sistemụ ha ka ha wee tinye ndepụta nke mbubata maka ikikere na-enye gị ohere ịgbakwunye nyocha nke nyocha na mkpesa. Oh, na CASL chọrọ ka ị nweta nkwenye sitere na kọntaktị ndị dị na listi gị site na July 1st, 2017 iji a nyochaghachi nkwenye. Ndị na-ere ahịa email ga-enwe nsogbu na nke ahụ!
Ozi ndị ọzọ na CASL
Cakemail emeela ọmarịcha ọrụ nke ijikọta ntuziaka na CASL - ị nwere ike ibudata ya ebe a. Oh - ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikwa ndenye aha gị nke ka mma, nye Unroll.me a na-agbalị! Ha na-esochi ozi ịntanetị ọ bụla dakwasịrị igbe ozi gmail gị ma ha na-enye gị ohere ịgbanye ọdịnaya ịchọrọ, ma ọ bụ wepu aha na ọdịnaya ịchọrọ. Gmail kwesịrị ịzụta ha!
Ikpeazụ ederede na nke a. Achọghị m ka ndị folks chee na m bụ onye nkwado maka SPAM. Adịghị m… echere m kwupụtara ikike-nke dabere na usoro azịza email na-enye nsonaazụ azụmahịa pụrụ iche. Agbanyeghị, m ga-agbakwunye na enwere m ezi uche maka nke a wee hụ ụlọ ọrụ too listi email ha ma mechaa zụlite azụmahịa ha site na ime ihe ike echiche ikikere mmemme.
Tags: achichanwere ike-spamCanadaIwu mgbochi Canadaakpunnapụtaegosipụtakwupụtara ikikekwuruechiche ikikereịpụ nahọrọ ọpụpụiwu spam